COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားမှုအကြား ဘရူနိုင်းနှင့် တရုတ်နိုင်ငံတို့ ခရီးသွားလုပ်ငန်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ဆက်လက်အားကောင်းနေ - Xinhua News Agency
ဘရူနိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ဒါဆရီဘဂါဝန်မြို့တွင် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် တရုတ်-ဘရူနိုင်း ခရီးသွားနှစ် ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားအတွင်း တင်ဆက်ကပြနေသော အကသမားများကို ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဇန်နဝါရီ ၁၇ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ဘန်ဒါဆရီဘဂါဝန်၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၈ ရက် (ဆင်ဟွာ)
ဘရူနိုင်းနိုင်ငံနှင့် တရုတ်နိုင်ငံကြား ခရီးသွားလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုသည် COVID-19 ကပ်ရောဂါ ဖြစ်ပွားနေသည့်ကြားမှ ဆက်လက်အားကောင်းနေဆဲဖြစ်ကြောင်း ဘရူနိုင်း သယံဇာတအရင်းအမြစ်များနှင့် ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီး Haji Ali က ဒီဇင်ဘာ ၂၇ ရက်၌ ပြောကြားခဲ့သည်။
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဘရူနိုင်း-တရုတ် ခရီးသွားနှစ် ပိတ်ပွဲအခမ်းအနားအား အွန်လိုင်းမှ ကျင်းပခဲ့စဉ် နှစ်နိုင်ငံသည် “ပုံစံသစ်ဖြင့်နေထိုင်ခြင်း (new normal)” အဖြစ်သို့ ဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်း၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်း လှုပ်ရှားမှုများကို အွန်လိုင်းပလက်ဖောင်းများမှတစ်ဆင့် ဦးစီးဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ဘရူနိုင်းနိုင်ငံ၏ ဒေသတွင်း ခရီးသွားလမ်းညွှန်မှုများနှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်း အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ကိုင်နေသူများအား တရုတ်ဘာသာစကားနှင့် ဆက်သွယ်ရေးစွမ်းရည်များ ထပ်မံတိုးတက်မှုရှိစေရန်အတွက် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် နိုဝင်ဘာလ၌ ကျင်းပခဲ့သော အွန်လိုင်းလေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်လည်း အပါအဝင်ဖြစ်ကြောင်း ကြိုတင်အသံသွင်းယူထားသည့်မှတ်ချက်များ၌ ဝန်ကြီးက ပြောကြားခဲ့သည်။
ဘရူနိုင်းနိုင်ငံ၏ Royal Brunei Airlines အား တရုတ်နိုင်ငံ ပေကျင်း၊ ချန်ရှား၊ ဟိုင်ခို၊ ဟန်ကျိုး၊ ဟောင်ကောင်၊ နန်နင်းနှင့် ရှန်ဟိုင်း စသည်တို့၌ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရန် တရုတ်အစိုးရက တိုးချဲ့ပံ့ပိုးပေးသည့်အတွက်လည်း ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ၎င်းက ပြောခဲ့သည်။
“ဒီချိတ်ဆက်မှုတွေက ခရီးသွားလုပ်ငန်း၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ ဆောက်လုပ်ရေး၊ ပင်လယ်ရေကြောင်းနှင့် အခြားနယ်ပယ်များမှာ စီးပွားရေးလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ အခွင့်အလမ်းတွေ ထပ်မံတိုးတက်လာစေပါတယ်” ဟု ဝန်ကြီးက ဆိုသည်။
“၂၀၁၉ ခုနှစ် ခရီးသွားဧည့်သည် ၇၄,၀၀၀ ကျော် ဝင်ရောက်မှုနဲ့အတူ တရုတ်နိုင်ငံက ဘရူနိုင်းအတွက် ထိပ်တန်း အရင်းအမြစ်ဈေးကွက်သုံးခုအနက် တစ်ခုအဖြစ် အမြဲတစေမှတ်ယူထားပါတယ်။ မဝေးတော့တဲ့အနာဂတ်မှာ ခရီးသွားပြန်စပြီဆိုတာနဲ့ ခရီးသွားဧည့်သည်ဝင်ရောက်မှုတွေကို ပိုပြီးကြိုဆိုနိုင်ဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ်” ဟု ဝန်ကြီးက ဖြည့်စွက်ပြောခဲ့သည်။
ဘရူနိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး Yu Hong က အဆိုပါပွဲက နှစ်နိုင်ငံ သံတမန်ဆက်ဆံရေး ထူထောင်ခြင်း နှစ် ၃၀ ပြည့်နှင့် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် တရုတ်-ဘရူနိုင်း ခရီးသွားနှစ်အတွက် အခမ်းအနားပွဲပေါင်းများစွာကို အောင်မြင်စွာ အဆုံးသတ်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
“ကပ်ရောဂါက ကျွန်မတို့ကို မျက်နှာချင်းဆိုင် အခမ်းအနားပွဲတွေ ကျင်းပခြင်းကို အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စေခဲ့သော်လည်း အပြန်အလှန်နားလည်မှု နက်ရှိုင်းစေဖို့ နှစ်နိုင်ငံ ပြည်သူတွေရဲ့ ကြင်နာတဲ့ ဆန္ဒမွန်တွေကို မရပ်တန်နိုင်ပါဘူး” ဟု သံအမတ်ကြီးက ပြောခဲ့သည်။
ဘရူနိုင်းနိုင်ငံ သယံဇာတအရင်းအမြစ်များနှင့် ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရ ကပ်ရောဂါကြောင့်ရွှေ့ဆိုင်းခဲ့ရသော ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဘရူနိုင်း-တရုတ် ခရီးသွားနှစ်သည် ပြည်သူအချင်းချင်း ကူးလူးဖလှယ်မှုမှတစ်ဆင့် ခရီးသွားလာရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု တိုးမြှင့်ရန်၊ နှစ်နိုင်ငံ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ၊ စွမ်းအားမြှင့်တင်ခြင်းနှင့် နှစ်နိုင်ငံကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် မိတ်ဖက်ဆက်ဆံရေး ထပ်မံမြှင့်တင်ရန် ထူးခြားသော ပလက်ဖောင်းတစ်ခု ပံ့ပိုးပေးခဲ့ကြောင်း ဆိုသည်။
ပူးတွဲအဆိုပြုချက်သည် နှစ်နိုင်ငံကြား နားလည်မှုတိုးတက်ရေး၊ ဘရူနိုင်းနှင့် တရုတ်ပြည်သူများအား တစ်နိုင်ငံနှင့် တစ်နိုင်ငံ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် ဓလေ့ထုံးတမ်းများအား ရှာဖွေရန်နှင့် ကြိုဆိုရန် ပိုမိုတွန်းအားပေးရေးနှင့် နှစ်နိုင်ငံကြား စီးပွားရေးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်မှုအခွင့်အလမ်းသစ်များ ပေါ်ပေါက်လာရေးတို့၌ အောင်မြင်မှုရှိခဲ့ကြောင်း ဝန်ကြီးဌာနက ဆိုသည်။ (Xinhua)
BANDAR SERI BEGAWAN, Dec. 28 (Xinhua) — Despite the COVID-19 pandemic, the tourism cooperation between Brunei and China continues to strengthen, Haji Ali, Brunei’s Minister of Primary Resources and Tourism, said on Monday.
During the closing ceremony of Brunei-China Year of Tourism 2020 held virtually, the minister said inapre-recorded remarks that as the two countries embarked into the “new normal,” tourism activities were organized via online platforms, includingavirtual training program held in November 2020 for Brunei’s local tour guides and tourism professionals to further improve their Chinese and communication skills.
He said the country is also grateful to the support extended by the Chinese government for Brunei’s national carrier Royal Brunei Airlines to operate in China’s Beijing, Changsha, Haikou, Hangzhou, Hong Kong, Nanning and Shanghai.
Yu Hong, Chinese ambassador to Brunei said at the ceremony that the event would bringasuccessful conclusion to this year’s series of celebrations for the 30th anniversary of the establishment of diplomatic relations between the two countries as well as the China-Brunei Year of Tourism 2020.
The joint initiative has proven successful in improving the understanding between both countries, encouraging more Bruneian and Chinese people to discover and appreciate each other’s cultures and traditions, and stimulating new business and investment opportunities between the two countries,” the ministry said. Enditem
ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံတွင် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ရန်ပုံငွေဖြင့် တည်ဆောက်ထားသော ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအဆောက်အအုံအား စစ်ဆေးမှု ပြီးစီး